पेस्ता सेवन गर्नाले हुने यस्ता अद्भूत फाइदाहरु, सबैले जानीराखौं – Annapurna Daily
पेस्ता सेवन गर्नाले हुने यस्ता अद्भूत फाइदाहरु, सबैले जानीराखौं
On Jan 30, 2022 3,937
पेस्ता मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने फल लाग्ने वनस्पति हो । स्वादिलो परिकार तयार पार्न पेस्ताको प्रयोगलाई प्रमुख स्वादका रुपमा सेफहरुले लिने गरेका छन्। पेस्ताको स्वाद मन नपराउने हामीमध्ये थोरै मात्र होलान् । ठूला होस वा साना सबै होटलका सेफहरु पेस्ताको बखान गरेर थाक्दैनन्। पेस्ता सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरु:
१) मुटु: नियमित रुपमा पेस्ता खानाले मुटुजन्य समस्या बाट सहजै छुटकारा पाउन सकिन्छ। पेस्ताले मुटुको धड्कनलाई नियमित बनाउन सहयोग गर्छ। पेस्ता सेवन उच्च रक्तचाप हुनेहरुका लागि अति उपयुक्त ओखती पनि हो। २) स्वस्थकर चिल्लो: पेस्तामा शरीरलाई फाइदा हुने चिल्लो पदार्थ लुकेको हुन्छ । ५० दाना पेस्तामा १६० क्यालोरी लुकेको हुन्छ । यसको अर्थ पेस्ता लो क्यालोरी भएको खाजा भन्दा पनि हुन्छ।
३) फाइबर: अन्य फाइबर जन्य खोराकको अनुपातमा पेस्तामा अत्यधिक मात्रामा फाइबर उपलब्ध हुन्छ । ४) क्यारोटिन: पेस्तामा क्यारोटिनोइड भन्ने विशेषता लुकेको हुन्छ जसले आँखाको जोतीलाई बलियो बनाइराख्न मद्धत पुर्याउँछ। ५) मासुको सट्टामा: पिस्तामा आबद्ध फिटोसटेरोल्स भन्ने तत्वले अन्य श्रोतबाट शरीरमा प्रवेशहुने कोलस्ट्रोललाई सोस्ने काम गर्छ। अनि यसले मासुले प्रदान गर्ने शक्ति प्रदान गर्छ।
६) प्रोटिन: हरियो सागसब्जिमा जस्तै पेस्तामा पनि प्रोटिनको मात्रा लुकेको हुन्छ र यसको सेवन साकाहारी तथा मान्साहारी दुबै थरिका मानिसहरु गर्छन् किनकि यसको प्रयोग माछामासुको सट्टामा गर्न सकिन्छ।
७) विषादीनाशक: केही निश्चित प्रकारका खानेकुरामा उपलब्ध फेनोलीक भन्ने तत्व पेस्तामा पनि उपलब्ध छ जसले शरीरमा विषादीनाशकको काम गर्छ। विषादीनाशक गुणले शरीरमा तनाव उत्पन्न हुन दिदैन जसका कारण क्यान्सर तथा मुटुजन्य रोगले घर बनाउन सक्तैन। ८) पोषण: पेस्तामा आइरन, पोटासियम, फासफोरस, म्याग्नेसियम तथा भिटामीन बी को मात्रा उपलब्ध हुन्छ ।
यो पनि: जिम्बु खाने गर्नु भएको छ ? यस्ता छन् जिम्बुका घरेलु उपचारको लागि औषधीय गुण, लसुन जस्तै तर प्याजी रंगमा फुल्ने मसिनो खालको वास्नादार बिरुवा हो जिम्बु। यसकौ बैज्ञानिक नाम Allium Hypsistum हो। यो विरुवा हिमाली भेकको ३९०० मिटर देखि ५५०० मिटरको उचाइमा पाइन्छ।मुस्ताङ र डोल्पाको माथिल्लो भेगमा पाइने एक किसिमको जडीबुटी जिम्बुलाई तरकारी तथा दालको परिकारमा झानेर खाने परम्परा छ।
झानेर खाँदा स्वादिष्ट हुने जिम्बुलाई मुस्ताङ्गीहरुले कोसेलीको रुपमा देशका विभिन्न भागमा पुर्याउने गरेका छन् ।समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार ५०० मिटर उचाई भन्दामाथि पाइने जिम्बुलाई टिपेर घाममा सुकाएपछि बजारमा लैजाने गरिन्छ ।
मुस्ताङको कागबेनी, मुक्तिनाथ, जोमसोम गाविसका माथिल्लो भेगमा पाइने जिम्बुलाई स्थानीयवासीले सङ्कलन गरेर किलोको हिसाबमा बिक्री गर्ने गर्दछन् । अचार, दाल र तरकारीलाई स्वादिष्ट बनाउन प्रयोग गरिने जिम्बु बेचेर घरखर्च समेत जुटाउने गरेका छन् । सर्वसाधारणले जिम्बुलाई खाना स्वादिष्ट बनाउन मात्र नभई घरेलु औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
जिम्बु खानुका फाइदाहरु: जिम्बुले अपच, अरुची, वायुगोला, संक्रमित रुघाखोकी, पिनास, पेटदुखाइ, सुनिने, जीउ दुखाई, मुसा तथा गिर्खा आउनेमा लाभ पुर्याउछ। चिसो, कफ सम्बन्धी रोगहरु, शरीर दुख्ने भोजन नमिठो लाग्नेहरुलाई खानामा रुचि बढाउछ ।
यो पनि,कहिले शिलाजित सेवन गर्नु भएको छ ? थाहा पाउनुहोस् शिलाजितका चमत्कारी औषधीय गुणको बारेमा:-नेपालका पहाडहरूमा पाइने जडीबुटीमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ । आयुर्वेदमा शिलाजीतको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ ।
रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि शिलाजीतको बडो महत्व छ । यौन दौर्बल्य अर्थात् नपुंसकताबाट पीडित विवाहित व्यक्तिले मात्र नभई अविवाहित युवकले पनि यसको सेवन गर्दा लाभ पाउँछ ।विशेषगरी मधुमेह, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, स्वप्नदोष, शारीरक दुर्बलता लगायतका रोगहरू यसले निर्मूल बनाइदिन्छ । उचित समयमा उचित योगका साथ विधिपूर्वक शिलाजीतको प्रयोग गर्दा असाध्य मानिएका रोग पनि नष्ट हुन्छन् ।
शुद्ध शिलाजीत १० ग्राम, केशर दुई ग्राम, अम्बर दुई ग्राम मिसाएर मजाले घोटेर दुई दुई रत्तीको गोली बनाउनुस् । यसलाई बिहान बेलुका दूधसँग खानुस् । स्वप्नदोष आउन बन्द हुन्छ अनि शरीरमा बल र पुष्टि आउँछ ।शीघ्रस्खलनका रोगी विवाहित पुरुषले यसको सेवन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । अमिलो कुरा नखाइकन कम्तीमा पनि ६० दिन यसरी शिलाजीत खानुपर्छ ।
यो तीतो, कसिएको र तातो हुन्छ । शिलाजीतको मुख्य उद्देश्य शरीरलाई बल दिएर स्वस्थ, शक्तिशाली र पुष्ट बनाउनु हो । शिलाजीत सुक्दाखेरी गोमूत्रजस्तो गन्ध आउँछ ।यसको सेवनले सेक्स पावर मात्र बढ्ने नभई बुढ्यौलीका समस्या पनि समाधान हुन्छन् । शिलाजीत चार प्रकारका हुन्छन् : रजत, स्वर्ण, लौह र ताम्र । प्रत्येक प्रकारको शिलाजीतका गुण तथा लाभ पनि प्रकृति अनुसार नै हुन्छ ।
पित्त प्रकोप (एसिडिटी) वा अम्लपित्त (हाइपर एसिडटी) बाट पीडित रोगी, आँखा रातो हुने समस्या, पेटको अल्सर, शरीरको ताप, अंगमा जलन जस्ता समस्या भएका व्यक्तिले शिलाजीत सेवन गर्नु हुँदैन ।शिलाजीतको सेवन गर्दा रातो खुर्सानी, तातो खाना र पेयपदार्थ, मसालेदार भोजन, मासु, अण्डा, रक्सी, माछा, मकै, सक्खर जस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन ।
त्यस्तै राति जागा बस्ने, बिहान ढिलोसम्म सुत्ने, मलमूत्रको वेग रोक्ने अनि असाध्यै श्रम वा व्यायाम गने पनि गर्नु हुँदैन । बजारमा शिलाजितका नाममा जे पायो त्यही वस्तु पनि पाइन्छन् । आधिकारिक ठाउँबाट मात्र शिलाजीत किन्नु उपयुक्त हुन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानामा पाइने शिलाजीत शुद्धताको कसीमा खरो उत्रिएकाले त्यहाँबाट किन्ने सल्लाह दिइन्छ ।